Lahaystayaasha is haysta ayaa na heysta
Xiriirka ka dhexeeya xaqiiqada siyaasadeed ee maanta Soomaaliya ka jirta iyo aqoonta aan u leenahay ayaa ah labo shey oo isa sudhan, waxaase lagama maarmaan ah in sidan loo dhigo. Xaqqiqada/reality waxey noqotaa aqoon/knowledge, waxa la’ogyahayna waxey noqdaan sida waxa hareeraheena ka dhacayaa ay sida dhabta ah oo ay ujiraan ay u yihiin.
Siyaasada Soomaaliya 17kii sano ee ugu dambeeyay waxey aheyd wax soosaarkii Ethiopia/Ethiopian product. Muuqaalkaasi wuxuu soo maray heerar iyo qaabab kala duwan, wuxuuse dhamestirmay shirkii Embagathi oo ay Ethiopia ku dhiiratay iib geynta nooca dowladeed ay Soomaaliya ka damcsan tahay, kaas oo ay ku mashquulsaneyd 14kii sano ka hor shirkaas oo ay si jiitan iyo daal farabadan ka dib TFGda si sandulle ah ku dhalisay.
Hadaba waxaa la’odhan karaa, in uu hardan weyni ka dhexeeyo riyadii hore ee lasoo cusbooneysiiyay ee Ethiopia iyo tijaabada fashilan ee riyadaas ka hor yimid. TFGda oo sidii aan kor ku xusay ah badeecad Ethiopia ayaa durbadiiba ay soo foodsaartay xilligii baaba’a iyo kala daadashada, oo ay ugu wacan tahay khilaafaadka isdaba jooga ah iyo madax banaani la’aanta go’aamada C/laahi Yusuf madaxweynaha TFGda iyo Cali maxamed Geedi ra’iisul wasaarah TFGda,
Hadaba waxaa in la xuso mudan, inta ay talada Soomaaliya Ethiopia kali ah ka go’do, in khilaafaadka TFGda dhexdeeda uu noqon doono khilaaf soo noqnoqda marwalba oo aan xal loo helin.
Caro eebe waxa ay ku dhici ciiduna
inkaari, waa niman caloosha iska
neceb ciidanna is mooda.
Burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya waxey eersatay, qabqablayaal aan ajanda siyaasadeed iyo karti shakhsiyadeed midna isku dhaamin oo aan iyaga laftoodu midba midka kale indhiisa buuxin Karin. Ka hor shirkii Carta waxaa jiray 14 shirar dib u heshiisiin oo dhowr dal lagu qabtay, waxa marwalba fashalinayay shirarkaasi waxa ay ahaayeen dhowrka qabqable ee ummadda fursadaha aadka qaaliga u ah kaga lumiyay is naceyb iyo wax isku qab qabsi dagaal oogayaashaas dhexdooda ka jiray.
Shirkii Embagathi waxyaabaha uu aadka ugu dheeraada waxaa sababaha ugu waaweyn ka mid ahaa xalinta qilaafaadka dagaal oogayaasha dhexdooda ka jiray. Tusaale ahaan Muuse suudi wareysiyadii uu BBcda laanta afka Soomaaliga sii deysay wuxuu C/laahi Yuusuf ku tilmaamay “nin kabo ka waaweyn raba inuu xirto”, halka uu isna C/laahi Yusuf ugu hanjabay qabqablayaasha Xamar hadii ay is hortaagaan natiijada shirka Embagathi kasoo baxda uu badda ku shubi doono.
Ka dib dhismihii dowlada TFGda, waxaa ay dowladu saldhig ka dhigatay Jowhar, oo marti loogu ahaa Maxamed Dheere oo xilligaa ahaa gudoomiyaha degmada Jowhar. Waxaa xusuus mudan, in khilaafyada xilligaa jiray ay dhowr jeer Ethiopianku dhexdhexaadiyeen C/laahi Yusuf iyo Maxmed dheere. Markii ay dowladu u wareegtay Baydhabo, waxa uu Maxamed Dheere warbaahinta ka yidhi, “Waxaa noo yimid oday dhaqameed Daarood ee mahaan madaxweyne ma’imaan”.
Waxaa ay khilaafyadii soo jiitamayay ay ku dambeeyeen, in labada nin ee ugu sareeya TFGda, madaxweynaha iyo ra’iisal wasaaraha oo ah labo qof oo aan horey xiriir uga dhaxey, balse la’isku tolay ay ugu dambeytii wada shaqey kari waayeen. Dowlada Ethiopia ma aha markii ugu horeysay oo ay dhaxdhaxaadin kasameyso C/laahi Yusuf iyo Cali Maxamed Geedi, mana noqondoonto markii ugu dambeysay ee khilaafyadani dhacan.
Mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya wuxuu u jajuuban yahay dagaal oogayaal ummaadda qiimaheedii iyo sharaftii shacabka dhulka lagalay. Raagaas oo aan anigu u bixiyay siyaasiyiintii aakhiru zamaanka, waxey galaafteen madaxbanaanidii, midnimadii iyo horumarkii ummaadda Soomaalioyeed. Dhibtii lagala kulmay burburkii ay horseedka ka ahaayeen siyaasiyiintii aakhiru zamaanka, waxey dadka iyo dalka beylah uga dhigeen khatar kasta oo dibadda, dariska iyo dalka gudihiisaba ka imaneysay.
Inta talada dadka iyo dalka Soomaaliyeed ay gacanta ugu jirta siyaasiyiintaas aan kor ku xusay, mustaqbalka soo socda ma’aha mid kheyr laga filan karo arimaha Somaaliya.
Dadka Soomaaliyeed waxaan kula talin laha, in umadda marlabaad dib loosoo nooleeyo, iyadoo waxyaabaha ugu horeeyay ee xooga lasaarayo ay yihiin;
Ø Ku dadaalista dib u heshiinsiinta iyo soo celinta amaanka
Ø Ka tagista qabiilka iyo qabyaalada
Ø Ka shaqeynta midnimada dadka iyo dalka
Ø Taageerista cadaalada iyo sinaanta dadka Soomaaliyeed
Ø Dhiirigalinta horumarka nolosha iyo tacliinta
Ø Sooclinta karaamda iyo sharaftii ummaddu laheyd
Waxaan gabogabadii qoraalkeyga kusoo xiri lahaa, lahaystayaasha is heysta ayaa nahaysta, in qormadan micnaha laga faa’iidi karo oo ay xambaarsantahay uu yahay, sadex geesoodka barmuuda ee dadlka iyo dadka Soomaaliyeed ay manta ku sugan yihiin. Waxaan kusoo khatimayaa tix yar oo gabay dheer kamid aheyd.
Ma dhamaan aduunkuye,
ilmaha dhaxal haloo reebo.